DeltaNewsAgency Archives - Delta News Agency
DNAရဲ့ သတင်းထောက်ဟောင်း ကိုမျိုးစံစိုးကို စစ်အုပ်စုက ဖမ်းဆီးထား
၃၁၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၂၁။ Delta News Agency ရဲ့ ဖျာပုံမြို့အခြေစိုက် သတင်းထောက်ဟောင်း ကိုမျိုးစံစိုးကို အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ဩဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရပါတယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းစရာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖျာပုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဘာ့ကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ကိုမျိုးစံစိုးဟာ ၂၀၁၉ခုနှစ်မှ စတင်ကာ Delta News Agency ရဲ့ ဖျာပုံမြို့အခြေစိုက် သတင်းထောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက…
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ရဲ့ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ကိုဗစ်နဲ့ ပျံလွန်တော်မူ
၂၆၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၂၁။ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ရဲ့ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ(အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)ဟာ ဩဂုတ်လ ၂၅ရက်နေ့ ည ၉နာရီ ၃၀မိနစ်မှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီး မန္တ‌လေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစဉ် ပျံလွန်တော် မူသွားတယ်လို့ မန္တလေး သာသနာ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ မော်ကွန်းထိန်းရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ မန္တလေး-ပရိယတ္တိသာသနဟိတ (သကျသီဟဓမ္မာစရိယ)၊ရန်ကုန် စေတိယင်္ဂဓမ္မာစရိယ၊ (သ. စ. အ ဓမ္မာစရိယ)၊ပဲခူးမြို့- သာသနင်္ကုရ ဓမ္မာစရိယတို့…
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒန်ချက်နေရာမှာ မစ္စတာပိဗို့ဇ်ကို ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လ ၂၃ရက်နေ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သံအမတ်သစ် ပိဗို့ဇ်ဟာ သြဂုတ်လမှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပြီး မစ္စတာ ဒန်ချက်ကတော့ တခြားသံတမန်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ပြောင်းရွှေ့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မစ္စတာ ပိဗို့ဇ်ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အာဖရိကနဲ့ အာရှဒေသ ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေနဲ ကျန်းမာရေး ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေ ယူခဲ့ဖူး ပါတယ်။…